झुक्यो ओली सरकार ! अब भारतबाट आउने तरकारी विषादी परीक्षण नगरी नेपालीले खानुपर्ने बाध्यता – Himalitimes
झुक्यो ओली सरकार ! अब भारतबाट आउने तरकारी विषादी परीक्षण नगरी नेपालीले खानुपर्ने बाध्यता
२०७६ असार २० १७:४० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल सरकारकै कारण अब जनताले विषादीयुक्त तरकारी जबर्जस्त खानुपर्ने भएको छ । सरकारले भारतबाट आउने ताजा तरकारीको विषादी परीक्षण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेसँगै परीक्षण नगरिने भएको हो । यो संगै नेपाली नागरिकले अब विषादीयुक्त तरकारी खानुपर्ने भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राविधिक तयारी नपुगेको जानकारी मन्त्रिपरिषद्लाई गराएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही सुझावको आधारमा निर्णय फिर्ता लिएको छ । नेपालमा आधुनिक प्रयोगशाला नभएकाले तत्काल परीक्षण कठिन देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
सत्यमान लामा पक्राउ प्रकरणको रहस्य खुल्दै, बुद्धचित्त मालाको मुद्दा सत्यमानले जितेपछि